आज विजयादशमी : टीकाको साइत १०:१९ बजे, कता फर्केर लगाउने ? - Janadesh Khabar
आज विजयादशमी : टीकाको साइत १०:१९ बजे, कता फर्केर लगाउने ?
'साइतमै टीका लगाउँदा देवीको शक्ति प्राप्त हुन्छ'
टीकाप्रसाद ग्रहण गर्न साइत खोज्नेका लागि भने १०ः१९ बजे उत्तम रहेको समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
विजयादशमी आफैंँमा शुभ दिन भएकाले टीका लगाउन सामान्य मानिसले साइत खोज्नु नपर्ने पनि उनले बताए ।
सत्ययुगमा देवीले महिषासुर र त्रेता युगमा रामले असत्यको प्रतीक रावणमाथि विजय प्राप्त गरेकाले त्यही समयदेखि विजयादशमी मनाउन शुरु गरिएको धार्मिक विश्वास छ । आजकै दिन मौर्यसम्राट् अशोकले शस्त्रास्त्र परित्याग गरेकाले बौद्धहरु शस्त्रपरित्याग दिवस मनाउँछन् ।
१० कात्तिक २०७७, सोमवार ०६:४० बजे प्रकाशित
थप २८५६ मा कोरोना संक्रमण, कहाँ कति संक्रमित ?
यस्ता छन् दशैंको टीका लगाइदिँदा आशीर्वाद दिने मन्त्र